Karen State Archives - Page2of2- News @ M-Media
Post Tagged with: "Karen State"
စစ်တပ်က တိုင်းရင်းသားများအပေါ်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေမှုကို အမေရိကန်ရောက် ကရင်လူမျိုးများ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ
နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၇ M-Media – တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကို ဆက်လက်ဖိနှိပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်ရေး ထရမ့်အစိုးရကို တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ အမေရိကန်ရောက် ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာ တနင်္လာနေ့က အမေရိကန်လွှတ်တော်အရှေ့မှာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုတစ်လျှောက် အမေရိကန်နဲ့[Read More…]
November 8, 2017 — မြန်မာသတင်း
လတ်တလော ဘာသာရေးပြသနာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကရင်ပြည်နယ် သာသနာရေး ဝန်ကြီး ဦးမင်းတင်ဝင်းနှင့် RFA ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
မေး – အင်္ဂလိကန်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာ စေတီတည်တဲ့ကိစ္စကို ဒေသခံတွေကလည်း ကန့်ကွက်မှုရှိနေတော့ ၀န်ကြီးတို့ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဘာတွေများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့တွေများ ရှိနေပါသလဲရှင်။ . ဖြေ – ကွမ်းတောကျေးရွာမှာကို အင်္ဂလိကန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ စေတီတော်တည်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့က ပြည်နယ်သံဃာ့နာယကအဖွဲ့၊[Read More…]
April 24, 2016 — Interview, မြန်မာသတင်း
October-19th- 2012 M-Media Myanmar Post Global Journal No (81) published on 19th. October 2012 had stated on its front page[Read More…]
October 19, 2012 — English Version